Naflacaari Farmaajo oo xilka ka qaadaya G/miyaha Maxkamadda CQS | KEYDMEDIA ONLINE
Naflacaari Farmaajo oo xilka ka qaadaya G/miyaha Maxkamadda CQS
Kooxda Farmaajo, waxa ay abuurayaan fowdo siyaasadeed, taas oo ay ku doonayaa in Caasimaddu mar kale marti galiso dagaallo kharaar, si uu mesha uga baxan eedaha loo heysto hoggaankii hore ee NISA.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay caddeynayaan warar soo baxaya Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa qorsheynaya inuu xilka ka qaado, Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur (Shuute).
Sida ay xoguhu tilmaamayaan Farmaajo ayaa xilkaan u magaacabi kara, Cabdiraxmaan Xasan Shareeco, kaas oo hadda ka mid ah xeer-ilaalinta Maxakmadda.
Farmaajo, ayaa tallaabadan u qaadaya si uu uga hor tago Cadaaladda kiiska Ikraan Tahliil, oo dacwadiisu ka furan tahay xaafiiska Xeer-ilaalinta CQS.
Dhowr jeer oo hore ayuu qaaday tallaabooyin u jeedkoodu ahaa inuu carqaladeeyo dadaallada uu Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsinta ku doonayo in ay qoyska Ikraan Caddaalad ku helaan.
Haddii sida wararku tibaaxayaan, uu Farmaajo, xilka ka qaado Xasan Cali Nuur (Shuute), waxa ay taasi ka dhignaan doontaa, in uusan marnaba ogolaan doonin in kooxda eedeeysan ee Fahad hoggaamiyo la hor geeyo maxakamadda.
Farmaajo ayaa geed dheer iyo mid gaaban u koraya siduu u dabooli lahaa kiiskaan, taas oo uu uga gol-leeyahay inuu gacmaha cadaadda ka badbaadiyo eedeysane Fahad Yaasiin oo la rumeysan yahay inuu masuul ka yahay af-dubka iyo dilka Ikraan, wuxuuna wali isku dayayaa inuu Koodiisu hudaha Xarunta NISA, si ay u baabi’iyaamn raadadka kiiska Ikraan.